ကဗျာမဟုတ်ပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » ကဗျာမဟုတ်ပါ	4
Posted by ko six on Jun 4, 2015 in My Dear Diary |4comments
မြစပဲရိုး says: . ကူချင်ပါတယ် ကိုစစ် ရယ်။
. လော့ကျတယ် ဆိုတာလေး အရင်ရှင်းပြပါဦး။
Alinsett @ Maung Thura says: make it new !!!!
Mike says: .ကျု ပ်တော့သိပ်မကျွမ်း
တောတွင်းပျော် says: ကဗျာ တင်နေကြ ဆရာ ဆိုတော့ 
ကဗျာမဟုတ်ပါကိုလည်း ကဗျာ ထင်မိသေး..